Biyyoota Garee C jalatti ramadaman afran - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoota Garee C jalatti ramadaman afran
Goodayyaa suuraa Antowaann Giriizmaan bara 2016 taphattoota cocollee Kiristaanoo Roonaaldoo fi Liyoneel Mesiitti aanuun Baaloon d'Or irratti sadaffaa ture.
Ramaddiin garee biyyoota Waancaa Addunyaa irratti hirmaatanii ba'eera. Garee C jelattis biyyoonni kunneen ramadamanii jiru.
Firaansi bara 1998 wayita Waancaa Addunyaa qopheessitee turtetti waancaa injifatte. Sana booda waggaa saddeet booda xumuraaf geesse. Bara 2014 Biraaziilitti nuusa xumuraaf geesse, bara 2016 ammoo qopheessummaa Waancaa Euro 2016 irratti adda durummaan hirmaatte.
Antowaann Giriizmaan bara 2016 taphattoota cocollee Kiristaanoo Roonaaldoo fi Liyoneel Mesiitti aanuun Baaloon d'Or irratti sadaffaa ture.
Taphataa ijoo: Antoyiin Gireezmaan. Taphataan sarara fuulduraa Kilaba Atileetikoo Maadiriid bara 2016 wayita Firaansi Waancaa Addunyaatiif geessetti goolii 6 lakkoofsise. Wayita Firaansi Beelaarusiin "2 fi 1n mo'attu goolii lammaffaa galche. Kanaan firaansi Onkoloolessa 10 waancaa addunyaaf dabarte.
Leenjisaan eenyu: Diidiyeer Deeshoo si'a 103 Firaansiif taphateera. Waancaa Addunyaa bara 1998 fi Chaampiyoonshiippii Yuruuppi kan bara 2000 akka Firaansi mo'attu gargaareera. Erga bara 2012tii dursaa Garee Biyyoolessaa ture. Akka gareensaa Euro 2016f darbanis gargaareera. Jarri 1 fi 0 dhaan tapha yeroo dheeraa booda Poorchugaaliin haa mo'atamaniyyuu malee.
Awustiraaliyaaf kun yeroo afuriif walitti aansuun walumaa galattimmoo si'a shaniif Waancaa addunyaaf dhiyaachuu agarsisa. Sadarkaa ol aanaan isaan galmeessan kan bara 2006 tti biyyoota 16 dhumaa keessa galanii 1-0n Shaampiyaanii Addunyaa kan taate xabataan Xaaliaan Tootii addabbii peenaalitii daqiiqaa 95 irratti argameen keessaa ba'an.
Goodayyaa suuraa Tiim Kaahiil Awustiraaliyaaf taphoota 103 irratti taphateera.
Taphataa adda-duree: Tiim Kaahil waggaa 37 ta'uu ni mala garuu nama murteessaa garee biyyasaa ta'uu itti fufeera. Taphataa sarara gidduu Everteen duraanii kun yeroo calalliitti gooliiwwan murteessoo lamaan marsaa lamaan Sooriyaa waliin taphatee mo'ate dabalatee si'a 11 lakkoofsiseera.
Leenjisaan eenyu? Lammiin Awustiraaliyaa dhalataa Giriik ta'e Angee Postekogluu guutummaa bara hojiisaa Awustiraaliyaaf taphachuufi gaggeessuun dabarsaa jira. Awustiraaliyaa Waancaa Addunyaa 2014f geessisee ture; yeroo sanatti taphoota sadan gareesaanii hunda irratti mo'amanilleen morkii gareen Ispeen, Neezerlaandiifi Chiilii waliin taasisaniif jajamaniiru.
Biyyi 32ffaa gulaallii kana dabarte Peeruun, galchiiwwan lama Jefersan Faarfaan fi Kiristiyaan Raamoos galchaniin 2-0'n Niiwuzilaand injifatteetu hirmaannaa waancaa addunyaa shanaffaa kan argatte. Qabxiin isaanii inni gaariin kan bara 1970 7ffaa ta'anii xumuran yoo ta'u, yeroo xumuraaf kan waancaa addunyaa irratti hirmaatan bara 1982 ture. Sadarkaa FIFA'n kennuun addunyaarraa 10ffaarra jiru.
Taphataa Ijoo: Lokomootiiv Moskoof kan taphatu Faarfaan, Peeruuf yeroo 79 hiriiree galchiiwwan 23 galcheera. Namni ganna 33 kun saffisa isaan beekama, tapha gulaallii kanarrattis galchiiwwan sadi galcheera.
Goodayyaa suuraa Lokomootiiv Moskoof kan taphatu Faarfaan, Peeruuf yeroo 79 hiriiree galchiiwwan 23 galcheera
Leenjisaan Eenyu: Maqaa masoo 'Qeerransicha' jedhamuun kan beekamu Arjentiin Riikaardoo Gaarekaa erga bara 2015 Peeruu Leenjisaa jira. Arjantiinaaf yeroo 20 kan taphate yoo ta'u, waggoota 20 oliif leenjisummaan hojjeteera.
Deenmaark Sirni waancaa kanarratti wayita hirmaattu yeroo 5ffaaf yoo ta'u, erga bara 2010 kuftee as isa jalqabaati. Milkaa'inni isaanii inni olaanaan isicha bara 1998ti. Bara sana nuusa xumuraaf darbanii Biraaziil kuffistee dabarte.
Taphataa ijoo: Taphoonni gaggaariin Deenmaark hundinuu taphataa sarara gidduu Tootenaam Kiriistiyaan Eeriikseniin ibsama. Taphataan Ajaaksi duraanii kun kubbaa warra manii lakkoofsisaniif mijeessuu qofa osoo hin taane ofumasaatii taphoota 78 keessatti galchii 18 galcheera.
Goodayyaa suuraa Eeriiksen bara 2003 ture paawondii miiliyoona 11n Ayaaksi irraa Tootenaam kan gale
Leenjisaan eenyu: Deenmaark Euro 2006 irratti milkaa'uu erga dadhabdee as Eej Heriid dursummaa garee Moorten Olsiin harkaa fudhate. Taphataan sarara ittisaa Manchister siitii fi Noorwiich duraanii liigii Siwiidiin si'a lama, kan Deenmaarkii fi Noorweyi ammo si'a tokko tokko mo'ateera.